Akụkọ - Mgbanwe Dijitalụ nke RIU n'oge COVID-19
Ilọ ọrụ RIU nke 35 nke ụwa malitere na Mallorca site na ezinụlọ Riu na 1953 dị ka obere ụlọ ezumike, na ntinye nke ụlọ nkwari akụ mbụ ya na 2010, RIU Hotels & Resorts nwere ụlọ nkwari akụ 93 na mba 19 nke nabatara karịa 4,5 nde ndị ọbịa otu afọ.
Site na aha mgbe ochie gaa na ZKONG Cloud ESLs
Dị ka akụkụ nke ọkwọ ụgbọala ya iji melite ahụmịhe ndị ahịa n'oge COVID-19, ụlọ nkwari akụ RIU chain na-achọ ụzọ iji kwalite ọdịdị na mmetụta nke ụlọ nri ya, ma hụ na ikike ịkọwa ozi gbasara nri n'ọtụtụ asụsụ kamakwa ịkwanyere ùgwù maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya. E wezụga RIU nwere oke iwelata oge na ọnụahịa nke imelite menu.
Otu o si arụ ọrụ
Abensys, onye anyị tụkwasịrị obi na Spanish bụ onye malitere ọrụ a, kwuru na njikọta na sistemu RIU site na API nke ZKONG dị mfe. Ihe niile ZKONG's ESL na-agba ọsọ ọnụ na nchekwa kachasị, kachasị ọsọ na otu ikpo okwu, nke enwere ike iji ụwa niile na-enweghị echichi, ndị ọrụ na ndị ọbịa nwere ike ijide n'aka na a na-edebe ozi nri n'ụzọ ziri ezi n'asụsụ dị iche iche ma melite n'oge.
· Ngwa ngwa na mfe echichi
· Ngosipụta doro anya
Ọrụ ndị anaghị akpọtụrụ
· Enweghị akwụkwọ ọrụ
· Unlimited oke maka ọdịnaya imewe